छात्राहरुले कलेज भर्ना हुन अनिवार्य ब्वायफ्रेन्ड बनाउनुपर्ने ! « Ok Janata Newsportal
छात्राहरुले कलेज भर्ना हुन अनिवार्य ब्वायफ्रेन्ड बनाउनुपर्ने !
काठमाडौं । संसारमा प्रायः विचित्रका समाचार हामीले सुन्ने गर्छौ । कति समाचार पत्याउने खाले हुन्छन् कति समाचार अपत्यारिला पनि । तर, कहिलेकाहीँ अपत्यारिला समाचार पनि सत्य हुन्छन् ।
नेपाली समाजमा विवाह पूर्व प्रायः केटाकेटीले माया गरेपनि समाजका अगाडि खुल्न डराउँछन् । विद्यालयमा पढ्दा शिक्षकसँग डराउँछन् । जसले सामाजिक मुल्यमान्यतालाई बचाएर राखेको हुन्छ । समाजमा सद्भाव कायम रहेको हुन्छ ।
पश्चिमा संस्कृति भन्दा नेपालको संस्कृति विश्वसामू अटल र स्वाभिमानी छ । अहिले पूर्वीय दर्शनलाई विश्वले अंगाल्न खोजेको पाइन्छ । कोरोना महामारीको बेला हात मिलाउन, हक गर्न गाह्रो हुन्थ्यो तर, हाम्रो संस्कृति नमस्कार विश्वमा चर्चित बन्यो ।
अब, भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रणय दिवस आउन केही दिन बाँकी छ । यो अवसरमा प्रेमप्रेमिका एकआपसमा माया साँटासाँट गर्छन् । जुनीजुनी साथ दिने कसम खान्छन् ।
तर, यो वर्षको भ्यालेन्टाइन डे नजिकिँदै गर्दा छिमेकी मुलुक भारतको एउटा कलेजले भने यसवर्षको प्रणय दिवसमा छात्राहरु एकजना प्रेमी अनिवार्य बनाउनुपर्ने भनेको छ ।
कलेजले जारी गरेको भनिएको अनौठो सूचना सोसल मिडियामा निकै भाइरल बनेको छ । सेन्ट जोन्स कलेजको लेटर हेडमा छापिएको एक सन्देशमा लेखिएको विषय आफैंमा अनौठो छ । त्यसमा लेखिएको छ कि आगामी भ्यालेन्टाइन डे सम्ममा कलेजका छात्राहरुले अनिवार्य रुपमा कम्तिमा पनि एकजना ब्वायफ्रेण्ड बनाउनै पर्नेछ ।
ब्वायफ्रेण्ड बनाउन नसक्ने छात्राहरुलाई कलेजमा प्रवेश नदिइने उक्त सूचनामा उल्लेख छ । सोसल मिडियामा भाइरल भइरहेको उक्त सूचनामा कलेजका सहायक डिन प्राध्यापकको नामको हस्ताक्षर राखिएको छ ।
कलेजले छात्राहरुको सुरक्षाको कारणले यस्तो नियम राखिएको पनि जिकिर गरेको छ । भ्यालेन्टाइन डेका दिन एक्ली छात्रालाई कलेज परिसरमा प्रवेश नदिइने पनि सूचनामा उल्लेख छ ।
छात्राहरुले कलेजको गेटबाट प्रवेश गर्दा आफ्नो ब्वायफ्रेण्डसँग खिचाएको एक तस्बिर समेत देखाउनु पर्नेछ ।
आफ्नो कलेजको नामको लेटरहेडमा त्यस्तो खालको सूचना सार्वजनिक भएपछि सेन्ट जोन्स कलेज प्रशासनको ध्यान आकर्षित भएको छ ।
सोसल मिडियामा भाइरल भएको उक्त सूचनामा कुनै सत्यता नरहेको र त्यो फर्जी रहेको कलेज प्रशासनले जनाएको छ ।
कलेजको नाममा त्यस्तो अफवाह फैलाउनेलाई सख्त कारावही हुने पनि कलेजले जनाएको छ ।